Chọta Ezigbo Yoga - WRSP
BIM EZIOKWU YOGA TIMELINE
1982: Kathryn Budig mụrụ Lawrence Kansas.
2004: Budig gụchara nkuzi nkuzi 200-hour na YogaWorks na Santa Monica, California.
2008: Budig tinyere aka na mkpọsa mgbasa ozi "Isi dị ka Templelọ Nsọ" ToeSox®.
2010: Mkparịta ụka #Nudegate na yoga metụtara Budig na mkpọsa ToeSox®.
2011: Budig wepụtara DVD mbụ ya, Kathryn Budig Aim Ezi Yoga, nke ghọrọ ihe ndabere nke ika ya.
2012: Budig bịanyere aka na nkwekọrịta ya na Under Armor Women dị ka onye na-agba ọsọ egwuregwu maka mkpọsa "Achọrọ M Ihe M Chọrọ".
2012: Ndị Ahụ Ike Bigmụ nwanyị Nnukwu Akwụkwọ Yoga site Budig bipụtara.
2012: Budig kwụsịrị ịkụzi ihe mgbe niile na YogaWorks.
2014 (October): Budig gosipụtara na Yoga Journalesemokwu "Isi Nke."
2015: Budig malitere esemokwu banyere nkwekọrịta ya nke mmegharị ahụ nke yoga.
2016: Akwụkwọ Budig Chọọ Eziokwu bipụtara, na-akọwapụta amamihe ya banyere ndụ.
Ezigbo Yoga bụ onye nkụzi a ma ama bụ Kathryn Budig mepụtara ma bụrụkwa akụkụ nke usoro ntinye aha ya nke sara mbara na-agbaso n'oge ịrị elu ya na ụwa yoga. Budig akọwala "Ezigbo Ezigbo" dị ka mantra nke aka ya ebe ọ bụ na 2011 emepeela obodo ime mmụọ a ma ama nke akọwapụtara na ahịrịokwu ahụ.
A mụrụ Kathryn Budig na 1982 ma tolite na Lawrence, Kansas. Nna ya, Gene Budig, na-arụsi ọrụ ike na Air National Guard wee rụọ ọrụ dị ka Onye isi nke Mahadum Kansas site na 1980 ruo 1994. Site na 1994 ruo 1999, ọ bụ onye isi oche nke American League, otu n'ime isi egwuregwu baseball abụọ na-eme gbagoo Major League Baseball (MLB) na United States na Canada. Na 1994, mgbe nna ya malitere ọnọdụ ọhụrụ ya, ezinụlọ ha kwagara Princeton, New Jersey, ebe Kathryn gara Princeton High School. O tinyere aka na mmemme ihe nkiri n'ụlọ akwụkwọ ya ma mesịa chụ isi abụọ na Bekee na Drama na Mahadum Virginia. Mgbe Budig gụsịrị akwụkwọ na kọleji, ọ kwagara Los Angeles, na-enwe olileanya ịme ya na Hollywood. Dabere na Rosman (2018), “ọ mechara chọta aha ama n'ụdị ọkwa ọzọ - ụwa nke Western yoga, nke ndị nwere ịnụ ọkụ n'obi, ọbụna ndị na-eme ihe ike bi na ya, ụmụ akwụkwọ ndị na-ele ndị nkụzi nwere ihu ọma anya dị ka ndị na-eme nri gaa ebe a na-amụ ihe dị ka a ga-asị na ha bụ egwuregwu rock. ”
Na 2004, Budig malitere ọzụzụ nkuzi yoga na YogaWorks ya na ndị nkuzi ashtanga a ma ama Maty Ezraty na Chuck Miller. O buru ụzọ na-akụzi ihe dị ka “akụkụ ọ bụla,” na-enwe olileanya ịchọta ọrụ ọ ga-eji na-akwado onwe ya ka ọ na-achụso ọrụ ịkpa ọrụ. Otú ọ dị, n'ihi nkụda mmụọ n'ihi ahụmịhe ya na Hollywood, ọ hụrụ onwe ya na omume ahụ. N'ime ọnwa iri na asatọ mgbe ọ malitere izi ihe na ụlọ ọrụ YogaWorks Santa Monica abụọ, klas ya nọ na-achọ ma o kpebiri ilekwasị anya na ọrụ nkuzi ya na yoga, na-ekwenye na ọ bụ "onye nwere obi ọma, ọ bụ ezie na ọ ka na-asọmpi, ọrụ nke nwekwara dabere na ọnụnọ ogbo na ngosi ngosi "(Rosman 2018).
Budig ghọrọ onye ama ama yoga ka ọ sonyechara na ToeSox® “The Isi Dị Ka Templelọ Nsọ ”ad mkpọsa malitere na 2008, nke na-egosipụta Budig kpamkpam ịgba ọtọ na-abụghị ToeSox® n'ụkwụ ya n'ọtụtụ ọkwa postural dị elu. [Foto dị n'aka nri] Foto dị ụtọ nke Jasper Johal sere, foto ndị ahụ mere ka ọ nwee ọhụụ ozugbo. Na 2010, mgbasa ozi mgbasa ozi nwetara oke nkatọ sitere n'aka ndị nkuzi a ma ama, ndị nwanyị, na ndị ọzọ na-eme ngagharị na yoga bụ ndị rụrụ ụka na onyogho ndị dị ka ndị ahụ gosipụtara na "Isi Dị Ka Templelọ Nsọ" mgbasa ozi nyere aka na mmekọahụ na nrigbu nke ụmụ nwanyị na ụlọ ọrụ yoga (Miller 2016) ). N'ụzọ na-eju anya, esemokwu gbara gburugburu mkpọsa ToeSox® nyeere Budig aka iru ndị mmadụ, usoro nke usoro mgbasa ozi ọhụụ dịka Facebook (nke dị maka iji ọha na eze malite na 2006) na Instagram (tọrọ ntọala na 2010). Budig gbakọtara ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-eso ụzọ na nyiwe ndị a, bụrụ otu n'ime ndị nkuzi yoga ama ama na mba ahụ.
O wepụtara DVD mbụ ya naanị, Kathryn Budig Aim Ezi Yoga, ndị na-eso afọ na 2011, na ebe ọ bụ na ji ahịrịokwu ahụ “Aim Ezi” dị ka ntọala nke ya onwe ika. Dabere na Budig soshal midia peeji ya, "Artemis, chi nwanyị nke ọnwa, kpaliri m imepụta Ezigbo Eziokwu: okwu niile gbasara etu m si ebi ndụ m." Ọ na-ahụkarị ihe ọ bụla akụkọ ifo, anwansi, ma ọ bụ ike karịrị nke mmadụ. N'otu oge mgbe ọ na-agabiga "eriri nke ihe ndị na-adịghị mma" na ndụ ya, ọ ga-agụ akwụkwọ na akụkọ ifo Greek na Roman (Budig 2010). A dọtara ya na akụkọ Artemis, nke Budig kọwara dị ka Huntress ma ọ bụ Chineke nke Ọnwa. Budig lere Artemis anya dị ka ihe atụ nke inwe obi ike nwanyị, onye na-echebe ụmụ nwanyị na onye na-enye ume. Ọrịa nke mmekọrịta dara ada, ahụmahụ ịzụ ahịa na-enweghị atụ mgbe akụkọ na-adịghị mma banyere onye ọlụlụ mbụ ya dubara ya na olu olu nke gosipụtara akụ ọla edo dị mfe na-agbakwunye n'akụkụ ọnwa ọhụụ. Gba olu ahụ mere ka ọ nwee obi iru ala na nzube ozugbo, site na mgbe ahụ gaa n'ihu, Budig hụrụ onwe ya na-ejide olu olu n'oge mkpa ma rịọ maka Artemis maka nkwado (Budig 2010).
Budig kwụsịrị ịkụziri klasị oge niile na Santa Monica na YogaWorks na 2012 wee gbanwee gaa nkuzi nkuzi yana ịlaghachi gburugburu ụwa, yana ịse vidio oge niile na saịtị Yogaglo gụgharia n'ịntanetị (Yogaglo weebụsaịtị 2019). N'afọ ahụ ọ ghọrọ onye na-eme egwuregwu nke Under Armor Women maka mgbasa ozi "M Ga-achọ Ihe M Chọrọ", na-eme usoro ntanetị nke ụmụ nwanyị na mgbasa ozi. Budig rụkwara ọrụ Ike Ụmụ nwanyị n'oge 2012 iji mepụta akwụkwọ mbụ ya, Ahụike Women'smụ nwanyị Nnukwu Akwụkwọ Yoga: Ntuziaka Dị Mkpa Iji Zuo Mind / Ahụ Ike (2012). Kemgbe ahụ, ọ bụ onye so dee maka Huffington Post, Yoga Journal, Gaiam, Thehụnanya Elebọchị, Elephant Journal, na MindBodyGreen ma gosipụta ya na mkpuchi nke ọtụtụ magazin, gụnyere Yoga Journal, Yoga International, Om Yoga na Ọfụma na-emekarị. Ọ bụkwa onye guzobere Poses for Paws, nzukọ na-enweghị ọrụ ọ malitere na 2007 na ndị mmekọ na ụlọ ọrụ yoga, gụnyere ToeSox®, iji nweta ego maka ebe obibi ụmụ anụmanụ.
Kemgbe 2014, Kathryn Budig agbasoro ụzọ dị mma maka nkuzi yoga, nghazi nke ghọworo akụkụ nke ụdị ndụ dị oke mkpa metụtara Aim True Yoga (Miller 2016). N'ọnwa Ọktọba 2014, Budig bụ ụdị mkpuchi nke Yoga JournalOkwu esemokwu bụ nke “Isi Ahụ,” nke gosipụtara isiokwu ya, “Cover Model Kathryn Budig on Self-Acceptance”. E gosipụtara okwu ahụ dị ka ụzọ dị mma karị maka akwụkwọ akụkọ ahụ, bụ nke nọ na-agbanye ọkụ n'oge na-adịbeghị anya n'ihi enweghị ọtụtụ nnọchi anya na mbipụta ahụ. Budig na Yoga Journal etinye aka na mgbasa ozi mgbasa ozi na-eji hashtag #loveyourbody dịka akụkụ nke mgbalị ahịa iji kwalite okwu a. N'agbanyeghị esemokwu banyere ọhụụ ya na-abawanye dị ka onye ọnụ na-ekwuru maka yoga dị mma (Miller 2016), Budig gara n'ihu na-emepụta ọdịnaya mgbasa ozi n'oge 2015 banyere mkpa ịhụnanya onwe onye na nnabata ahụ dị ka ụzọ nke "ịchọta eziokwu."
N’afọ 2016, o bipụtara akwụkwọ nke abụọ ya akpọrọ Chọta Ezigbo: Hụ Ahụ Gị n'Anya, Rie Nweghị Egwu, Na-azụlite Mmụọ Gị, Chọpụta Ezi Ọdịdị, nke kọwakwuru na nkà ihe ọmụma ya. [Foto dị n'aka nri] Budig (2017) akọwaala ya dị ka "akwụkwọ obibi ndụ nke na-eme yoga, ntụgharị uche, isi nri, mmekọrịta mmekọrịta na nkà ihe ọmụma niile n'okpuru ncheta nke ihe ọ pụtara ịbụ eziokwu." N'oge nkwalite maka akwụkwọ ahụ, Budig gosipụtara Aim True Yoga dị ka "ụzọ iji nyere ndị na-agba mgba aka ha" (Rice 2019). Dị ka Budig si kwuo, "site n'ịgbasa ozi ụwa niile nke ịbụ eziokwu nye onwe gị, ọ nwere ike ịmepụta obodo nwere ike ịkọwa ibe ha ma kwado ibe ha" (Rice 2019).
N'oge na-adịbeghị anya, Budig nọ na-agbanwe site na nkuzi yoga ka ọ lekwasị anya na ọrụ ya dị ka onye na-emetụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya gbasara ahụike na ahụike yana ịchụso ọrụ ọkachamara na nri (Rosman 2018). Ọ na-agbazi Podcast ugbu a, Kuki na-akwụghị ụgwọ, ya na onye na-akwado ya na onye chọrọ ịlụ, Kate Fagan. Site na espnW nke emepụtara ya, Budig na Fagan na - apụ apụ n'obodo ha, Charleston, South Carolina. Budig akwụsịla njem, gụnyere nkuzi yoga na klaasị ya. Ihe mgbanwe ndụ ndị a ga-apụta maka ebumnuche Ezigbo Yoga na obodo ga-ahụ. Ọ nwere ụmụazụ 224,000 ugbu a na Instagram yana ihe dịka 230,000 na Facebook.
"Ezigbo ezi" bụ mantra nke onye guzobere Aim True Yoga, Kathryn Budig. Dabere na Budig, ịma mma na ike nke ahịrịokwu ahụ bụ na ọ bụ eluigwe na ala. Nke ahụ bụ, otu ndị mmadụ nwere ike iwepụta otu nkọwa, ma onye ọ bụla nwekwara nghọta pụrụ iche nke ahịrịokwu ahụ, na -eme ka ọ bụrụ ahụmịhe nke ya. Ezigbo Yoga na-eji yoga dị iche iche, ntụgharị uche, na usoro nri iji nyere ndị na-eso ụzọ aka ịghọta "nkọwa nke onwe ha nke ihe pụtara imezu eziokwu - egbugbu ọnụ nke dị n'ime obi gị, na-egosi otu ịchọrọ isi bie ndụ gị" (Budig 2016: 1).
Dika edere ya n’elu, Budig ji okwu a mee ihe site na nwata ya nwere mmasi n’akụkọ ifo Greek mgbe ochie na otu chi nwanyị, bụ Atemis, “nke a maara dịka chi nwanyị nke ọnwa na ichu nta, yana onye nchekwa ụmụ nwanyị” (Budig 2016: 1). Mgbe okwusiri olu nke Budig chetara ya akụkọ ifo ọ na-agụ n'oge ọ bụ nwata, ọ gwupụtara nyocha ọzọ na akụkọ ifo ndị gbara Atemis gburugburu wee malite iji ekpere na-eso ya, bụ nke mechara bụrụ ihe ndabere maka ụdị yoga ya:
Artemis, dinta ọnwa, -eme ka ebum n’uche m. Nye m ihe mgbaru ọsọ iji chọọ na mkpebi siri ike iji nweta ha. Nye m udo na okike, kwe ka m biri gburugburu osisi na anụmanụ m nwere ike itolite, chebe ma zụlite. Nye m ume na amamihe ịbụ nne ukwu m, na-akọwaghị ihe ndị mmadụ tụrụ anya ya. Na ịkwado mmekọahụ m dị ka nke gị-nke ọhịa na enweghị onwe ya dị ka okike n'onwe ya (Budig 2016: 3, mesiri ike).
Ezigbo Yoga yiri ụdị yoga ndị ọzọ na ọdịnala ime mmụọ ndị na-adabere na nghọta onwe onye. Agbanyeghị, n'ime obodo a amaara aha, ewepụrụ uche a site na usoro yoga kpọmkwem ma ọ bụ nkwenkwe mmụọ ma mesie ike na ụzọ enyemaka onwe onye zuru oke iji nyere ndị na-eso ụzọ aka ịchọpụta otu ha chọrọ ibi ndụ "eziokwu" ha. Imchọpụta eziokwu bụ "ohere ịnabata ikike gị wee chọta ọnọdụ udo nke ịnabata onwe gị" (Budig 2016: 7). N'akwụkwọ ya, Budig na-akọwa ebumnuche dị ka "ịchụso ịchọta ihe na - eme ka ị dịrị ndụ] [na] ịmụ ihe njirimara gị na ikike gị dị ịtụnanya ka ị wee soro ndị nọ gị gburugburu kerịta ha" (Budig 2016: 13). Site n'ime nke a, ọ kwenyere na ndị na-eso ụzọ ya nwere ike ịpụ n'ime ụwa, gbaa ọkụ ha, ma gbaa ndị ọzọ ume ime otu ihe ahụ (2016: 14).
N'oge ulo akwukwo, Budig akowaputala otu ichota ezi “putara ubochi obula n’ebum n’obi ibu ihe kachasi nma, ime mkpebi ndi kwekoro na ebumnuche a, ma ghara isikwa uzo” (Maros 2019). Nkà ihe ọmụma nke Aim True Yoga gụnyere ịhụnanya onwe onye, ​​ihe kachasị mkpa Budig na-eche na n'oge ọ malitere ịzụlite akara ya, ọ "na-emecha afọ asaa na LA, obodo nke ndị zuru oke, mara mma, ndị na-egbu egbu…. Ebe ọ bụ na m na-ahụ maka ahụ ike, ọ na-ewute m nke ukwuu karị, enwere m nsogbu nke ụdị ahụ m nwere. ” Ọ bụ n'oge a ka o kpebiri ịmegharị ahụ dị mma na ndụ ya, nke mejupụtara n'ime akara ya. Dị ka Budig si kwuo, site na iji ezi obi mee ihe "na ahụ anyị, anyị na-akọwa ya site na mmetụta anyị, nke na-enye ohere ike ịpụta" (Budig 2016: 27). Otu n'ime ụmụ akwụkwọ Budig akọwaala ụzọ anọ dị iche iche a ga-esi chee banyere "ịchụso eziokwu" dị ka Budig kụziri n'otu oge ịlaghachi azụ, gụnyere ịtọlite ​​ebumnuche maka ndụ gị, ịzụlite mmekọrịta ntụkwasị obi na ịhụnanya gị na onwe gị, ịchọta ọrụ ndị kwekọrọ na gị ebumnuche na ebumnuche, na ịbụ ndị ọrụ site na isoro ụwa kerịta onyinye na onyinye (Maros 2019). Dabere na Budig, "nnukwu akụkụ nke ịchụso eziokwu bụ ịsọpụrụ onwe gị ma ghara ịtụ anya na atụmanya na mkpebi ndị ọzọ.… Nghọta a na-enyere ndị mmadụ aka ịhụ n'oge gara aga akụkọ ha na-agwa onwe ha banyere ebe ha na-enweghị ma ọ bụ nwere ike ka mma" (Rice 2019).
Ọ bụ ezie na Budig zụrụ azụ na ndị nkuzi abụọ na-eme ụdị yoga dabere na usoro ashtanga nke K. Pattabhi Jois guzobere, Aim True Yoga gụnyere obere ihe site na ọdịnala ma ọ bụ usoro ọmụmụ a karịa emesi ike n'oge omume postural na post aerobatic (eg, ogwe aka ma ọ bụ aka guzo) na ihe a na-akpọkarị taa dị ka ụdị mmiri vinyasa. N'ime oge yoga omume, Budig bu n'uche inyere ụmụ akwụkwọ aka ịwepụ onwe ha na nsogbu ọ bụla ma ọ bụ nkwenkwe na-egbochi onwe ha nke ha nwere ike ijide, site na ime ka omume dị obere karịa nke ndị nkụzi ndị ọzọ (Rice 2019) Ezigbo Yoga si otú a nwekwuo njikọ chiri anya n'ụdị a kụziri site na nkuzi YogaWorks karịa usoro ashtanga kwa otu. Ezigbo Yoga abaghị nke ọ bụla na nkuzi ọ bụla sitere na nkà mmụta sayensị ma ọ bụ ọdịnala ime mmụọ, kama ịkwalite nkwalite echiche ụwa nke ụwa.
Otu n’ime ihe omume mbụ Budig ji mepụta akara aka ya bụ ekpere o kperegara Artemis nke akọwara n’elu nke mere ka o mesie okwu a ike “aim ezi.” Taa, Aim True Yoga na-etinye yoga dị iche iche, ntụgharị uche, na mmemme nri na omume nke Budig na-eji na ndụ nke aka ya ma na-akwalite ndị na-eso ụzọ ya, gụnyere ngwaọrụ enyemaka onwe onye dị iche iche dị ka akwụkwọ akụkọ nke ndị na-eso ụzọ na-eme. dika, Budig 2016). Emere ụdị omume a dị iche iche iji kpughee ikike pụrụ iche nke ndị mmadụ ma jiri ha na-agbaso agụụ nke mmadụ, si otú a na-ebi ndụ kachasị mma nke mmadụ, site na nkà ihe ọmụma nke Kathryn Budig kwalitere. Omume ndị a na-enye aka mepụta ihe Arvidsson (2005) na-ezo aka dị ka obodo ndị ama ama. Ihe omume nkuzi nke Budig, ọkachasị ebe ọ na - azụ akwụkwọ, nlọghachi, na klaasị (ntanetị na mmadụ), na-enyere aka ịmepụta ahụmịhe nke mmụọ na ụkpụrụ n'etiti ụmụazụ ya na ụmụ akwụkwọ. Ozizi Budig na-elekwasị anya na ahụ na ụdị ọrụ ahụ dị iche iche nke ndị na-eso ụzọ nwere ike ịchụso dịka ụzọ isi bụrụ eziokwu na ndụ ha.
Ozizi Budig na-etinye klaasị yoga dị omimi mgbe niile, gụnyere usoro mgbagwoju anya na nke ikuku na-adị ka aka aka na ogwe aka. [Foto dị n'aka nri] Usoro usoro dị iche iche dịgasị iche iche site na klaasị ruo na klaasị, mana o yiri ka ọtụtụ ụdị vinyasa na-asọpụta, klaasị asana Budig na-ebido site n'ụdị ebumnuche ma ọ bụ isiokwu, nke na-esetịpụ ụda maka klaasị ma na-enyere aka ịkekọrịta ahụmịhe na mmetụta anụ ahụ n'etiti ndị sonyere. Nke a na-esote ụfọdụ mgbanwe na ekele anyanwụ, usoro dị iche iche na-eduga na "ọnọdụ dị elu," jụụ, na n'ikpeazụ oge dị mkpirikpi na savasana, ma ọ bụ ozu.
Ulo akwukwo nke Budig na nloghachi na ejikotara ndi ozo ihe ndi ozo, tinyere iri ihe na ị drinkingụ ihe ọ withụ withụ na ndị ọzọ bịara, ịkọ akụkọ, ihe omume spa, yana ọrụ mmega ahụ ndị ọzọ dị ka sọọfụ, nka agha, ịgba ọsọ elu igwe, njem njem, ịnya anyịnya, ma ọ bụ ịgba ụta. Nri dị ezigbo mkpa nye Budig, ọkachasị nyere ya ọfụma ọkachamara na nso nso a banyere ahụmịhe nri. Mgbe etinyere nri n'ime Aim Ezi yoga, dị ka usoro nri na mmemme ndị edepụtara na akwụkwọ 2016 ya, emume ndị a na-ebute ihe oriri na-edozi ahụ nke ọma, nri zuru oke dị ka isi ihe gbasara ahụike, ahụike, na ịme onwe onye.
Ezigbo Yoga bụ akara nke onye guzobere Kathryn Budig. Budig anaghị azụ ndị nkuzi n'ụdị usoro omume ya, nke pụtara na ọ bụ naanị onye nkuzi nke Aim True Yoga. Ka o siri dị, Budig na-ejigide ikike na njikwa nke usoro na ọdịnaya emepụtara.
Nzukọ a gbadoro ụkwụ na-erere ndị na-eso ụzọ ya nkuzi na ngwaahịa Budig, mana ọ gụnyere ọrụ Budig dị ka onye na-emetụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya na yoga na oghere ọma. Ezigbo Yoga si otú a na-etinye echiche onwe onye na ahụmịhe nke Budig na ndụ ya kwa ụbọchị (dịka, mmalite nke ika ahụ na-ejikọta ya na nkọwa nke aka ya yana iji okwu a "chọrọ ezi" na ndụ ya na ahụmị na ịzụrụ ọla edo edo olu na-anọchi anya Artemis). Ofdị onye ndu na nhazi nke Aim True Yoga kwekọrọ na ahụmịhe nke ọtụtụ ndị ọzọ na-ahụ maka mgbasa ozi mmekọrịta (SMI) bụ ndị na-eji teknụzụ dijitalụ ọhụrụ iji nweta ọnọdụ ndị a ma ama. Hearn na Schoenhoff (2016: 194) kọwara etu “SMI si arụ ọrụ iji mepụta ụdị isi obodo ama ama” site n’ịzụlite anya dị ka o kwere mee na ịkọpụta ezigbo “akara aka” site na netwọkụ mmekọrịta, nke ụlọ ọrụ na ndị na-akpọsa ngwa ahịa maka ịgbasa ozi. ” N'echiche a, “micro-celebrity bụ echiche na usoro omume nke ụlọ ikpe na-elebara anya site na nghọta banyere ndụ nke ndị ọrụ ya, yana echiche nke ịdị adị nke na-eme ka ndị na-eso ụzọ ha nwee akụkọ ha, akara ngosi ha, ma nwee mmekọrịta chiri anya” (Khamis, Ang, na Welling 2017: 202; leekwa Marwick 2013). Mmekọrịta Budig na ndị na-eso ụzọ ya bụ nke onwe ma na-emeziwanye site na mgbasa ozi mgbasa ozi mgbe niile yana ya na-akụzi ihe omume na ngwaahịa ndị metụtara ya.
Agbanyeghị na Budig bụ onye isi na-ebute nzukọ Aim True Yoga, ọ na-esonyere ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ndị mmadụ n'otu n'otu na ụlọ ọrụ yoga na karịa iji kwalite ụdị ya ma wulie ya. Ndị a gụnyere ndị nkuzi yoga ndị ọzọ ama ama dị ka Seane Corn sitere na nzukọ Off the Matt Into the World®, onye bụ otu n'ime ndị nkuzi Budig na ndị enyi ogologo oge. O nwekwara nkwado ụlọ ọrụ na ToeSox®, n'okpuru Armor Women, Ike Ụmụ nwanyị, yana mmekorita ya na Kira Grace (ụlọ ọrụ akwa yoga), Vapor Organic Beauty ngwaahịa, na Asha Patel ọla. Budig akụziwo Aim Ezi Yoga mgbe niile Yoga Journal ihe omume na ememme Wanderlust yoga, yana ọtụtụ ụlọ ọrụ na ebe a na-eme egwuregwu na United States na mba ụwa.
Budig na akara aka ya bụ Ezigbo Yoga abanyela na arụmụka dịgasị iche iche banyere ịmalite ịmalite mmekọrịta nwoke na nwanyị na mmekọrịta nwoke na nwanyị. Na 2010, ntinye aka ya na ToeSox® na-esonyere ya na mkparita #Nudegate mgbe otu n'ime ndị guzobere Akwụkwọ Yoga, Judith Lasater, degara magazin ahụ akwụkwọ ozi na-ekwupụta nchegbu ya banyere ntuziaka akwụkwọ ahụ na-agbaso, ọkachasị gbasara amụma mgbasa ozi nke akwụkwọ akụkọ na ime ka omume ahụ pụta ụwa. Agbanyeghị na Lasater anaghị ekwu maka mkpọsa mgbasa ozi ToeSox® nke gosipụtara Budig, ndị na-ede blọgụ yoga a ma ama bụ Roseanne Harvey nke Ọ bụ All Yoga Baby yana oke egwu akuko yoga Yoga Dork kpuchie ibe. Edere ha abụọ gosipụtara foto site na mkpọsa ToeSox® iji gosipụta isi okwu Lasater banyere omume nke mmekọahụ na mgbasa ozi yoga. Ndị saịtị ndị ọzọ ama ama dị ka ndị a họpụtara ndị a Akwụkwọ akụkọ Elephant, bụ ndị gosipụtara ihe oyiyi ahụ site na mkpọsa ToeSox® na mkpuchi ha banyere nchegbu Lasater (Yoga Dork 2010; Harvey 2010a; Harvey 2010b). N'ihi #Nudegate, Budig chere ọtụtụ mwakpo ntanetị aka na nkatọ dị ukwuu maka ọrụ ya na ịmalite na mmekọrịta nwoke na nwanyị nke yoga, nke ọ kwurula banyere ya n'ọtụtụ oge, gụnyere na nzaghachi e gosipụtara na Huffington Post na September nke afọ 2010 nke isiokwu ya bụ “Gịnị Mere Anyị Ji Enwee Nnọọ Iwe’? Afọ ole na ole ka e mesịrị, nsonye ya nke ọma na ya bụ Aim True Yoga ika mere ka esemokwu dị n'etiti ndị ọkachamara na nwanyị, bụ ndị chere na Budig na-arịwanye elu dị ka onye ọnụ na-ekwuchitere ahụ maka yoga dị mma bụ nsogbu na ngalaba ọrụ Yoga na Isi Ihe Njikọ Aka (Lee, Miller 2016).
Nyere ntinye nke ndu onwe ya na yoga ya, ya na nlezianya nke ichota nke ndi mmadu na-achota na ndi mmadu na-achota na ntaneti, njem nke Budig nke onwe ya nke puta dika ihe ndi ozo. Kathryn Budig lụrụ Bob Crossman na 2014 mgbe ha zutere mgbe ọ bụ onye nkuzi ya na mbara igwe na 2011. Budig na-ekwukarị mmekọrịta na agbamakwụkwọ ha na ibe ya. Agbanyeghị, njikọ ha anaghị adịgide. Budig zutere Kate Fagan nke ESPN n'ọtụtụ ihe omume, na 2015 Budig na di ya kpebiri ikewapụ mgbe Budig chọpụtara na ọ hụrụ Fagan n'anya (Rosman 2018). Dabere na Budig, "na soshal midia, ahụrụ m ọnụ ọgụgụ buru ibu mgbe m gwasịrị ndị mmadụ na ahapụrụ m di m ma binyere nwanyị. O doro m anya na ụfọdụ ndị iwe na m gbara alụkwaghịm…. Ọ bụrụ na m tinye foto gbasara anyị [Budig na Fagan]… ọ na-enweta ụda ịhụnanya na nkọwa na mmasị na post ahụ, mana n'azụ ihe nkiri ahụ, ndị mmadụ na-adapụ "(Gonsalves 2019).
N'ọtụtụ ụzọ, Aim True Yoga na-egosipụta ahịrị ndị na-adịwanye njọ n'etiti ịgbaso mmụọ na obodo ndị akpọrọ. Ọ ka edobeghị anya na mgbanwe ndị na-aga n'ihu na ụzọ onye ọrụ Kathryn Budig si arụ ọrụ na ahụike, ahụike, na nchụso nri ga-emetụta ọdịdị nke nwa akwụkwọ ya na-eso ma ọ bụ nkwenkwe ime mmụọ nke Aim True Yoga kwuru.
Foto # 1: ToeSox "Isi dị ka Templelọ Nsọ" na-egosipụta Budig.
Foto # 2: Ihe mkpuchi nke akwụkwọ nke Budig nke abụọ, Chọọ Eziokwu.
Foto #3: Kathryn Budig na-akuzi klas nke postural site na iji archery isiokwu ha.
Arvidsson, Adam. 2005. "Branddị: A Critical Ele." Akwụkwọ akụkọ nke Culture Consumer 5: 235-58.
Budig, Kathryn. 2016. Ezigbo Ezigbo: Hụ Ahụ Gị n'Anya, Rie Nenweghị Egwu, Na-edozi Mmụọ Nsọ Gị, Chọpụta Ezi Nkwụ. New York: William Morrow.
Budig, Kathryn. 2012. Ahụike Women'smụ nwanyị Nnukwu Akwụkwọ Yoga: Ntuziaka Dị Mkpa Iji Zuo Mind / Ahụ Ike. Emmaus, PA: Akwụkwọ Rodale.
Budig, Kathryn. 2010. “Mee Ka Ihe M Bụrụ Eziokwu: Chi nwanyị Gris na-egosi M Mezọ.” Akwụkwọ akụkọ Elephant, February 11. Nweta site na https://bit.ly/2WAeI2a na 20 June 2019.
Gonsalves, Kelly. 2019. "Kathryn Budig na Ihe Wellness oghere nwere ike ime Iji Nwee More LGBTQ-Enyi na Enyi." MindBodyGreen. Nweta site na https://bit.ly/2Mum8nQ na 20 June 2019.
Harvey, Roseanne. 2010a. "Judith Hanson Lasater Slams Yoga Journal maka 'Sexy Mgbasa ozi esighi na.'" Akwụkwọ akụkọ Elephant, August 6. Nweta site na https://bit.ly/2Rfby2I na 20 June 2019.
Harvey, Roseanne. 2010b. "Toesoxnudegate: Ndị Feminists na Kathryn Budig Na-ekwu Okwu." Ọ bụ All Yoga Baby, September 9. Nweta site na https://bit.ly/2Qxa1Hu na 20 June 2019.
Khamis, Susie, Lawrence Ang, na Raymond Welling. 2017. "Onwe-mbọn, 'Micro-celebrity' na ịrị elu nke Social Media Influencers." Ọmụmụ ndị a ma ama 8: 191-208.
Maros, Michelle. 2019. “Mee Ka Ebum n’uche Gosi Eziokwu.” Uche Udo, Ndụ Udo. Nweta site na https://bit.ly/2X7g60q na 20 June 2019.
Marwick, Alice E. 2013. Mmelite Ọkwa: Ndi ama ama, Mgbasa Ozi, na Brandmepụta na Social Media Age. New Haven: Yale University Press.
Miller, Amara. 2016. "Iri Yogi Ọzọ: Kathryn Budig, Yoga Complex Complex, na Kwesịrị Ekwesị nke Ahụ." Agbụrụ na Yoga 1: 1-22.
Osikapa, Andrea. 2019. "Kathryn Budig: Ihe Ọ Pụtara Iji Chọọ Ezi." Na-agagharị. Nweta site na https://bit.ly/31sDfK1 na 20 June 2019.
Rosman Onyekwere 2018. "Kathryn Budig na Otu esi ebi ndu n'ezie." Yoga Journal, July. Nweta site na https://bit.ly/2KMkICz na 20 June 2019.
Yoga Dork. 2018. “Yoga Mgbasa ozi ọ bụla na-enwe mmekọahụ? Were echiche gị na Judith Lasater vs. Yoga Journal, ToeSox Nudegate. ” Yoga Dork. Nweta site na https://bit.ly/2RoIFAq na 20 June 2019.
Weebụsaịtị Yogaglo. 2019. Nweta site na https://www.glo.com/ na 15 June 2019.